विवाहभोज खाना जाँदा सर्यो कोरोना सङ्क्रमण, एकै घरका बाबु र दुई छोराको मृत्यु – Sandesh Press
विवाहभोज खाना जाँदा सर्यो कोरोना सङ्क्रमण, एकै घरका बाबु र दुई छोराको मृत्यु
May 14, 2021 330
बागलुङको बडिगाड गाउँपालिका–४ मा एकैघरका तीन जनाको कोरोना सङ्क्रमणबाट मृत्यु भएको छ । उनीहरूको एक हप्ताभित्रै मृत्यु भएको हो । बडिगाड–४ को जलजलामा दुई हप्ताअघि विवाहभोज खाएकाहरू नै सङ्क्रमित भएका थिए । मृत्यु हुनेमा पनि विवाहभोजमा गएका नै रहेको स्थानीयवासीले बताएका छन् ।
स्वास्थ्य कार्यालयका अनुसार मृत्यु हुनेमा एकै घरका ८७ वर्षीय बाबु, ५१ वर्षीय र ४० वर्षीय दुई छोरा रहेका छन् । उनीहरूमध्ये ८७ वर्षीय बाबु र ४० वर्षीय छोराको धवलागिरि अस्पताल बागलुङ र ५१ वर्षीय छोराको मणिपाल शिक्षण अस्पताल पोखरामा मृत्यु भएको स्वास्थ्य कार्यालय बागलुङका कोभिड फोकल पर्सन देवप्रकाश घिमिरेले बताउनुभयो ।
एक हप्ताअघि हेलिकोप्टरबाट पोखरा उपचारका लागि लगिएका बडिगाडकै अर्का ४० वर्षीय एक पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ । यस घटनापछि बडिगाडमा सन्त्रास छाएको छ । अधिकांश मानिस डराएका छन् । गाउँपालिकाको स्वास्थ्य शाखाले कम्तीमा १५ दिन घरभित्रै बसिदिन आग्रह गरेको छ । प्रशासनले भने जेठ १५ सम्मका लागि बागलुङ जिल्लाभर निषेधाज्ञा लगाएको छ ।
Prevबागलुङका सङ्क्रमित आइसोलेशनमा बस्दा नाचेको भिडियो बन्यो भाईरल (भिडियो सहित)
Nextके तपाई सुनचाँदी किन्दै हुनुहुन्छ? यस्तो छ आजको सुनको मूल्य
सोच विचार गरेर मात्र पैसा खर्च गर्छन् यी राशिका व्यक्ति, यी राशिले उडाउँछन् हावामा, तपाईको कुन ?
भोलि देखी फेरी कडा लकडाउन सुरु हुँदै ?
शिल्पाले पिडा पोख्दै भनिन्- २२ वर्षको हुँदा अक्षयसँग भर्जिनिटी गुमाए तर उसले धोका दिएर गयो